Gịnị kpatara GUBT | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Chengdu GUBT Industry Co., Ltd.
Akụkụ nke VSI
VSI akụkụ mapụtara
GUBT nwere 30+ ndị injinia zụrụ azụ nke ukwuu, ndị ọrụ 120+ maara nke ọma, ụlọ ọrụ nkedo 4 na-agbasawanye, 1000+ Molds, ụlọ ọrụ nyocha zuru oke. Site na ahụmịhe afọ 30+ n'ichepụta akụkụ ihe nhịahụ dị elu, GUBT bụ onye na-ebubata gị ntụkwasị obi.
GUBT na-enye akụkụ dị iche iche maka igwe. Mkpuchi ngwaahịa ya sara mbara na-enye gị ohere ịzụta ihe zuru oke yana ihe dabara n'otu oge. Ọ na-azọpụta oge na-echekwa ọnụ ahịa.
GUBT nwere otu ndị na-ere ahịa ama ama nwere ahụmịhe ụlọ ọrụ afọ 8. Ha bụ ezigbo ndị ndụmọdụ gị maka ịhọrọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị, na-edozi nsogbu ndị na-achịkọta ihe, na-ebute mmepụta na nnyefe, na inye nkwado ọrụ aka ọkachamara. Ha dị maka enyemaka ọkachamara 24/7 iji nyere gị aka.
GUBT na-edobe ihe ọhụrụ ma na-emezi arụmọrụ nke akụkụ eyi. Dị ka ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu, ndị ahịa na-eji akụkụ GUBT crusher ga-enwe 10% -15% ogologo ndụ ndụ ma e jiri ya tụnyere ọkwa ụlọ ọrụ. Ọ ga-adịkwa echekwa ọnụ yana nchekwa.
Monday-Sun. : 7*24
Aha ika niile, aha ụdị ma ọ bụ akara bụ nke ndị nrụpụta ha nwechara. GUBT enweghị njikọ na OEM. A na-eji usoro ndị a naanị maka ebumnuche njirimara na ebughị n'obi gosipụta njikọ na ma ọ bụ nkwado nke OEM. GUBT na-arụpụta akụkụ niile, ma ọ bụghị nke OEM zụrụ ma ọ bụ kwadoro ya.